‘लभ स्टेशन’ बाट किन बाहिरिइन निरुता सिंह ? | Nayashaktionline.com-No.1 News portal from Nepal, Political News, Science, Social, Sport, Ecomony, Business, Entertainment,Movie, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview, International News, Local News, Nepal News, All News, Total News, News, News of Nepal, Our Nepal, Every News, Bhaktapur, Kathmandu, Lalitpur All Nepal‘लभ स्टेशन’ बाट किन बाहिरिइन निरुता सिंह ?
Home मनोरञ्जन ‘लभ स्टेशन’ बाट किन बाहिरिइन निरुता सिंह ?
‘लभ स्टेशन’ बाट किन बाहिरिइन निरुता सिंह ?
काठमाडौँ : ‘नाईं नभन्नू ल ५’ बाट अभिनयमा कमब्याक गरेकी अभिनेत्री निरुता सिंहको अहिले चरित्र अभिनेत्रीमा चर्को डिमान्ड छ । चाँडै उनी महसंचारको फिल्म ‘दाल भात तरकारी’ का लागि नेपाल ओर्लिदैछिन् । तर, एक फिल्मबाट भने हात झिकेकी छन् ।
उज्जवल घिमिरेको निर्देशन रहने फिल्म ‘लभ स्टेशन’ बाट निरुता बाहिरिएकी हुन् । यो फिल्ममा ‘दर्पण छाँया’ जोडी अर्थात् निरुता र उत्तम प्रधानको अभिनय रहने खबर थियो । हाल फिल्मको दार्जिलिङमा छायांकन भइरहेको छ ।
पिता विरामी भएका कारण निरुताले फिल्म गर्न नसकेकी हुन् । उनले रहर भएर पनि फिल्म गर्न नपाएकोमा दुःख पोखेकी छन् । यो फिल्ममा युवा स्टार प्रदिप खड्का र ‘लिलिबिली’ गर्ल जसिता गुरुङ लिड रोलमा छन् । यसका निर्माता गोविन्द शाही हुन् ।
आलोक शुक्लाको छायांकन रहने फिल्ममा शम्भुजित बाँस्कोटा, दीपक शर्मा, राजनराज शिवाकोटी र एलिश कार्कीको संगीत रहनेछ । ‘लभ स्टेशन’ मा श्रद्धा क्षेत्री, सरोज खनाललगायतका कलाकारहरुको अभिनय रहनेछ ।
हरियो खुर्सानी खानुका यी अर्धभुत फाइदाहरु
प्रधानमन्त्री ओली र कोस्टारिकाका राष्ट्रपति क्वेसाडाबीच भेटवार्ता